Ny lamaody any an-tanàna amin'ny maha-mpamorona azy, lamaody | Famoronana an-tserasera
Toy ny amin'ny sehatra sy sehatra rehetra dia misy hatrany toerana sy tranokala manana ny lazany, predilection ary fiderana bebe kokoa amin'ny sehatra iray manokana. Tahaka an'i Hollywood fantatra amin'ny anarana hoe tanànan'ny nofinofy amerikana ho an'ireo mpilalao sarimihetsika sy mpanatontosa sarimihetsika, ny tanàna hafa dia miavaka amin'ny kilasiny mamorona, izany hoe handraisana, hipetraka ary hitadiavana olona sy matihanina miavaka amin'ny sehatry ny famoronana ao an-tanàna mba handray anjara. cache. Anisan'ireny tanàna ireny dia niavaka foana izy ireo Buenos Aires, Barcelona na Madrid.
Profesora iray ao amin'ny Oniversiten'i Toronto no natokana hitady sy hanasongadinana ny famoronana, Profesora Richard Florida, navoaka tamin'ny 2002 ny boky mitondra ny lohateny "Ny fiakaran'ny kilasy famoronana". Hitantsika amin'ity boky ity, araka ny heviny, ny olona sy ny vondrona mihevitra ny tenany ho protagonista tantara.
1 Protagonista an'ny "Ny fiakaran'ny kilasy famoronana"
2 Tanàna na mponina ao aminy
3 Ny manodidina ny tanàna mamorona
Protagonista an'ny "Ny fiakaran'ny kilasy famoronana"
Ireo mpandray anjara fototra amin'ity boky ity dia ireo olona misongadina amin'ny sehatry ny famoronana. Raha atao teny hafa, ireo mahazo karama indrindra, ny be karama indrindra ary ny be indrindra pahefana mirona amin'ireto matihanina ireto. Ny fahalalan'izy ireo, ny fifandraisana ara-tsosialy sarobidy amin'ny tontolo iainana omeo ireo tombontsoa ireo amin'ireo tanàna onenan'izy ireo.
Tanàna na mponina ao aminy
Tsy maintsy manontany tena isika raha ny tanàna na ny olom-pireneny no mamorona toerana mamorona. Raha jerena ny zavatra efa hita, tompon'andraikitra amin'ny fikarohana toerana misy olona manana ny lazany eo amin'ny taniny ireo tanàna handresy ny ady. Ny tombontsoa azo avy amin'ny fandraisana mpiasa an-trano ao amin'ny fiarahamonintsika dia mifandraika amin'ireo asa atolotry ny orinasa. Miteraka kandidà mety hitranga izany. Azonao atao ny milaza fa miaina ao anaty isika ady ho an'ny talenta ny famoronana.
Ny manodidina ny tanàna mamorona
Fifantohana sy massification ny famoronana na antsoina koa hoe bohemians dia misy valiny amin'ny fanovana ireo tanàna kely manetry tena ao amin'ireo tanàna lehibe. Ohatra vitsivitsy mazava ny toerana misy ny fomba Malasaña, any Madrid; na ny Teraka, any Barcelona. ny fampahafantarana amin'ireny Niteraka fiakaran'ny vidin'ny fivarotana sy ny hofan-trano ireo tranonkala, ary noho izany, mampihetsika ny mpiara-monina aminao antitra noho izy ireo nosoloina matihanina mahay. Raha fintinina dia azontsika lazaina izany ny hoe "milay" dia mavesatra mihoatra ny lovantsofina.
Afaka mahita isika a fampielezan-kevitra izay mandrisika ny fampahavitrihana ny famoronana ao Buenos Aires sy ny fandraisan'anjaran'ny olom-pireneny hampiroborobo ny manodidina azy ireo.
Ho famaranana dia tsy maintsy dinihintsika izany ny fepetra fampiroboroboana ny mpiara-monina dia midika hoe fanovana azy ary ento any amin'ny toerana faratampony andao hamoy ny fotony, hany ka manjaka indray ny tombontsoa ara-toekarena noho ny kolontsaina. Sarobidy ve izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ireo tanàna be mpitady indrindra amin'ny zavaboary
Ny LEGO dia mametraka ho an'ny olon-dehibe ary miala sasatra